Ebube Diamond Ankh Pendant (14K) - Popular Jewelry
Iend Out Diamond Ankh Pendant (14K)
Ogo: 45.5 mm * x Obosara: 21 mm *Ogo: 47 mm * x Obosara: 22 mm * size:
Mgbakwunye. 1.39 *Mgbakwunye. 1.56 * Carats:
14 Karat Ọla edo14 Karat edo edo Karat ihe:
Ogologo: 45.5 mm * x Obosara: 21 mm * / Ihe dị. 1.39 * / 14 Karat White Gold - $ 2,158.79Ogologo: 47 mm * x Obosara: 22 mm * / Ihe dị. 1.56 * / 14 Karat Yellow Gold - $ 2,590.79 Iche:
Mkpụrụ obi dị iche iche jikọtara iji gosipụta ihe mkpuchi Ankh na mgbapụta nwere nkwado nke na-enye nchekwa ergonomic.
Ahịa Dị Oké Ọnụ Ahịa: 14 Karat Yellow Gold